Ciyaar qani ku ah saamaynta la, isku dhowr ah oo ku siin kara natiijo weyn. Halkan ah waxoogaa fikrado ah oo ku saabsan saamaynta aad gaari kartid maktabadda caadiga ah si ay u abuuraan natiijada xiiso leh mashaariicda aad.
1. saamaynta 8mm
Mid ka mid ah in ka badan oo caan u muuqataa dadka jecel, waxaa jira plugins ganacsi oo badan oo ay ku cilinta fiirin 8mm sida darteed, si kastaba ha ahaatee, waxaa jira siyaabo si aad muuqaalka u eg ay ka yimaadeen Zaman kale oo aan plugins kasta, sida aynu arki doonaan.
Tallaabada ugu horreysa ee lagu gaarayo fiirin tani waa si ay ula qabsadaan heerka jir ah. Kamaradaha 8mm diiwaan footage 12, 14, 16 ama 18 loox kasta labaad, oo sidaas ayaan u baahan yihiin in la yareeyo heerka jir oo ka mid ah muuqaalka ah in this jilo. Muujinta clip aad ka shaqeeya in waqtiga iyo in tab saamaynta ayaa salka ku tagay midkood helo saamayn Posterize Time ama nooca 'post' in bar raadinta si ay u tagaan in ay.
Jiid xaalkaas gal clip iyo tani waxay suurtogal inaad la qabsato heerka jir ah clip ah.
Waxaana bedeli kartaa heerka jir ah, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad tijaabiso u dhadhan shakhsi, laakiin waxaan ka heli mid 14 loox kasta labaad siinayaa qiyaas wanaagsan.
Next ilaa aan ku darno midabka saamayn RGB Corrector ah
Halkan waxa aad ka dhigay gamma 1.6, mar kale, dhadhan shakhsi soo gala, waxa weeye geedi socod hal abuur ka dib oo dhan, isku day inaad ku beddelaan goobaha iyo aad u hesho wax aad jeceshahay, waxaan sidoo kale u beddelo haysa in ay 0.2 u helaan in 0.8
Saamaynta final ku darto waa midabkeeda
Kale badan xawaaraha, laga yaabee in dabeecadda qeexo stock 8mm waa midabkeeda ka, waxa ka soo baxay in laba dhadhan, midabkeeda oo qabow cagaaran oo ah midabkeeda diiran orange. Si loo gaaro fiirin tan, mar aan codsan filter si ay clip aan qorsheynay aan kartaa tints madow iyo caddaan adigoo gujinaya kasta inay soo qaadaan dawdarka midabka iyo dooran midabka oo ku habboon, mar kale, qayb ka ah tijaabo halkan shaqeyn karaan yaabab.
Talaabada ugu dambaysa waa in la dhigo xaddiga in midabkeeda. Qiimaha Tani waxay aad u badan ku xiran tahay saameynta aad raadinayso laakiin 40% u muuqataa in ay hal dhibic ka bilaw fiican.
Waxaa aad u leedahay, saamaynta 8mm.
Tallaabo dheeraad ah halkan, waa in la helo a 'xoqid iyo boodh' dahaadhaa clip, oo la soo dhaafay galay waqtiga badan sare ee aad clip doorsoon si uu u siiyo fiiriyaan dadka da'da ah ee intaa dheer in kaabidda midabka iyo wixii la mid ah, laakiin qaar badan oo ka heli kaliya qabsiga midabo ka soo maydhay, midabkeeda iyo heerka jir ah u san yahay mashruuc kasta.
Saamayn 2. Ken Burns
Magacaabay ka dib markii taariikhyahan caan ah oo filim hawlgeli Ken Burns waa isticmaalka digsiga iyo zoom gudahood image weli si ay u abuuraan dhalanteed ah dhaqdhaqaaqa. Ken si joogto ah u fuliyey in uu shaqada ku Civil War American iyo shaqooyin kale oo taariikhi ah halkaas u dhaqaaqo footage ahaa ma doorasho ah.
Furaha saamaynta ay tani tahay isticmaalka keyframes iyo beegyada uu booska.
Iyadoo clip ama image in waqtiga, talaabada u horaysa waa in ay maraan si ay jir ugu horeysay.
Halkan waxaan la isticmaalayo image fiican ee Saturn.
Iyadoo waqtiga dhigay jir ah 1-dii, u tag guddi gacanta saamaynta, oo guji icon stopwatch soo socota labada Jago iyo koobin Miisaanka goobaha video gudahood, taasi abuuri keyframe dhigay ee scale iyo booska labadaba.
Sababtoo ah jilitaankii dari doonaa keyframes cusub si toos ah markii u dhimaya kasta mar hagaajiyay dhigay via stopwatch ah, shaqadaas adag oo dhab ahaan inoo sameeyey by software-ka, sidaas oo kalena haatan aan si fudud u baahan yihiin in ay maraan si ay jir ee la soo dhaafay clip ah, qabsato koobin iyo keyframe la abuuray inoo waqtiga hadda.
Dheellitir miisaanka yar iyo jagada, oo wuxu daba waxaa. Waxa kale oo aad taas ku badbaadin karto sidii horena u ah isticmaalka ka dib in la hubiyo dhimaya miisaanka ah loogu soo xulay iyo guji badbaadin horena ay u xaq u top. Tani waxay badbaadin doonaa kala duwan oo dhan digsi oo Mozilla in la isticmaalo mar kasta oo aad dooni.
3. madow iyo caddaan
Mid ka mid ah fudud, laakiin mashruucan midig, saamaynta ugu waxtar badan in aan fulin karo waa madow iyo caddaan. Ma ahan wax walba, laakiin footage madow iyo caddaan uu awood u leeyahay si ay u gaadhsiiso niyadda lagu alkumay in ay adag tahay in sharaxo, iyo sida ay tahay saamayn ku ool ah qof kasta inay ka adkaadaan.
Warka fiicani waxa weeye waa sahlan in la sameeyo iyo ka dhigeysa in badan oo ka mid ah qolka Brasil uga goobaha si ay u helaan oo kaliya xaq u eegto aad ka dib waa.
Cabbayso clip kaa gelin doonaa waqtiga, iyo gudahood guddi saamaynta ka nooca 'Black and White' galay guddi raadinta ama maraan si ay gacanta ku image oo si fudud u jiidi saamaynta madow iyo caddaan rogtid oo aad clip in waqtiga. Horayba! Footage madow iyo caddaan.
Jecel kale oo loogu talagalay dadka si ay u tijaabiso, oo haddana kale oo jilitaankii ka dhigaysa noo fududahay in la isticmaalo. Green screen, muddada farsamo waa furaha chroma, awood u saamayn badan in la isticmaalo waxaana laga yaabaa in dadyow ugu hordhac first to saameyn gaar ah ee video.
Waxa ugu weyn waa Ciyaar ayaa qalab dhisay inaad tan sameyso, sidaas halkan waxaan ku socon doonaa, iyada oo loo marayo tallaabooyin ku lug. Tallaabada ugu horreysa waa in meel footage in la badalay doonaa meelaha cagaarka ah dhinacooda waqtiga, hubiyo in tani ay tahay wadada video mid.
Next dari clip labaad, mid ka mid ah in ka mid ah shaashadda cagaaran, ee waqtiga sida track video 2, si toos ah kor ku xusan clip ugu horeysay.
Haddaba tag guddi saamaynta iyo nooca 'chroma' ama falgali ilaa saamaynta video iyo keying si aad u hesho chroma saamaynta muhiimka ah.
Jiid xaalkaas gal screen clip cagaaran si ay u dhaqaajiso.
Hadda waxaa si fudud waa su'aal ah ee aad dooranayso midabka la bedelay iyadoo la isticmaalayo qalab eyedropper ah.
Hadda qabsato goob isku mid ah ilaa iyo video ah on track mid badalay cagaaran. Waxaad ganaaxi karaa habayn la boorish, marinkii iyo xadka, tijaabo si ay u helaan saamayn aad dooni.
Markaas si fudud u badbaadin mashruuca oo la moodo sida loogu baahan yahay.
Screen Green la buunbuuninayo ugu yar.
5. saamaynta Laydhka
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu adag tahay in la xakameeyo markii filim waa soodejinta, sababtaas saamaynta nalal aad caan u noqday, waxay inta badan la jecelyahay iyo mid aad wax ku ool u caddeeyaan, iyo nasiib wanaag noo Ciyaar ka mid ah xulashada inoo ah.
Sida abid, bilaw clip ku raran galay waqtiga, markaas raadiso nalalka in guddi saamaynta.
Kontaroolada waa arrin dhamaystiran halkan, bixiya a 3 nooc oo iftiinka kala duwan, iyo ilaa 5 iftiimmo guud ahaan. Waad beddeli kartaa midabka, baaxad ahaan, qaabka iyo jihada iftiinka kasta sida aad dooneyso inaad la kontaroolada in laguu suurogeliyo in la abuuro dhow wax saameyn ah aad u doonayaan. Tani waa mid ka mid ah kuwa saamaynta in aad u baahan tahay oo kaliya tijaabinayo si aad u hesho looks aad rabto, waxaa jira fursadaha aad u badan oo leh tirada fursadaha la heli karo.
Waxaanan rajaynayaa in tani ayaa aad caawiyeen qaar ka mid ah waxyeelada ka sii jecel yahay waa in ay suurtagal tahay la jilitaankii, qaar ka mid ah, sida Black White ah, waa mid aad u fudud inay isticmaalaan mar alla markaad ogaato meesha aad tagi lahayd, halka kuwo kale, sida filimka fiirin 8mm, u baahan a waxoogaa shaqo dheeraad ah, laakiin waa hubaal u qalantaa u kala duwan yihiin, waxay ka dhigi kartaa in ay mashruuc kasta oo.
> Resource > Video > 5 Great Video Raadka ee Adobe Ciyaar iyo sida loo isticmaalo